Famoronana sy seho : Manovo ainga vao eto an-tanindrazana ny tarika Njava -
AccueilVaovao SamihafaFamoronana sy seho : Manovo ainga vao eto an-tanindrazana ny tarika Njava
Famoronana sy seho : Manovo ainga vao eto an-tanindrazana ny tarika Njava
Mivoy ny kanto malagasy, indrindra eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Mandalo ary manovo aingavao eto an-tanindrazana ny tarika Njava. Ankoatra ireo mpikambana eto an-toerana, toa an-dry Dôzy sy Pata, dia saika any ivelany avokoa ny ankamaroan’ny mpikambana. Amin’izao fandalovana izao, dia hisy ny fanavaozana hiran’ny tarika efa fantatry ny mpankafy sy ny famoronana hira vaovao. « Namonjy azy mirahalahy tany Mangily izahay, ary teo amoron-dranomasina no namoronana hira roa vaovao », araka ny fanazavana nentin’i Monika Njava. « Mbola ny fandraisam-peo no vita tamin’ireo famoronana vaovao, fa mbola ho masahina tsara vao atolotra ny mpankafy », hoy ihany izy raha nanamarika fa tsy hokaloin’izy ireo mandritra ny fampisehoana ataony etsy amin’ny Kudeta Anosy ireo hira ireo ny alakamisy 1 marsa izao manomboka amin’ny 9 ora alina. « Efa fampanantenaina nataonay io nandritra ny seho farany nataonay teto Madagasikara tetsy amin’ny IFM analakely, ny volana desambra tamin’ny taon-dasa ; ary izy io hotanterahinay », hoy hatrany ity andrimbavilanitra mpanakanto ity. « Mety amiko kokoa ny seho takariva toa izao, indrindra amin’ny toerana somary kelikely, satria mifanakaiky kokoa amin’ireo mpankafy aho », hoy kosa i Pata, izay amin’ireo mpitendry ao amin’ny tarika Njava.
Ireo hira rehetra nahafantarana ny tarika Njava no ho kaloin’izy ireo amin’io seho io, fa hisongadina kokoa ireo somary mihetsiketsika toa ny « Doany », « Volampilongoa », « Antsa »… ankoatra an’i Monika sy Lala eo amin’ny fihirana, dia hitondra ny talentany amin’ny hetsika ireo anadahiny ahitana an’i Dozzi, Pata, Maximin. Tsy afaka amin’io seho io kosa i Dàdà, ka i Miary Lepiera no hanampy azy amin’ny fitendrena.
Na tsy eto an-tanindrazana aza, dia maharaka tsara ny fivoaran’ny mozika eto an-tanàna ny tarika Njava, ary antony iray nahatonga azy ireo hamoaka rindran-tsary vaovao, amin’ny fandrindrana vaovao nefa tsy miala amin’ny fototra, hiran’ny tarika vitsivitsy amin’izao fandalovan’izy ireo an-tanindrazana izao.